Tsvakurudzo idzi dzinovakirwa pamashoko akaisvonaka aripo panguva ino. Izvo zvinobva pane zvakasiyana-siyana zvezvinyorwa zvandakanyongedza kwemakore mazhinji, uye zvinogara zvichiri kuongororwa. Ndiri kufara kupa mitsara yekutsvaga sevhisi kune vanoenda kune shiri, asi vari pasi pehuwandu hwekushaya. Kana ukawana chero kukanganisa, tapota usanonoka .
Shiri Rokuongorora Nenyika nderimwe chikamu cheAvibase uye Bird links kune World, iyo yakagadzirirwa uye yakachengetedzwa naDenis Lepage, uye yakagadzirirwa naBird Studies Canada, iyo inobatanirana naBirdlife International.
Isa kadhi pamapu
Ratidza mazita ekuongorora: Nyika / masango / nzvimbo Itai sangano / mapurovhinzi Ratidza nzvimbo dzose
Isa zita renzvimbo: